အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အညိုရောင် မယ်စကြာဝဠာ
မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲဝင် စုစုပေါင်း ၈၉နိုင်ငံမှာ ကျွန်မတို့နဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ စသဖြင့် ပါဝင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရောင်စုံပြီး
ထူးဆန်းစွာ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးက ဝတ်စုံတွေကိုကြည့်ပြီး တကယ်လို့များ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကသာ Miss Universe ကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာကိုယ်စားပြု ဝတ်စုံဟာ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ ဆွမ်းအုပ်နဲ့များ ဖြစ်လေမလား၊ လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ကရော အခုဖော်ပြထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေထဲမှာ ဘယ်ဝတ်စုံကိုများ နှစ်သက်ပါသလဲရှင်။
အမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ ပြီးတဲ့အခါ ဆန်ကာတင် ၁၆ယောက် ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဆန်ကာတင် ၁၆ယောက်ကတော့1. Miss France (Laury Thilleman) 2. Miss Kosovo (Afërdita Dreshaj) 3. MissColumbia (Catalina Robayo) 4. Miss China (Luo Zilin) 5. Miss Angola (Leila Lopes) 6. Miss Australia (Scherri-Lee Biggs) 7. Miss Puerto Rico (Viviana Ortiz) 8. Miss Brazil (Priscila Machado) 9. Miss Netherlands (Kelly Weekers) 10. Miss USA (Priyani Puketapu) 11. Miss Ukraine (Olesya Stefanko) 12. Miss Panama (Sheldry Sáez[) 13. Miss Costa Rica (Johanna Solano ) 14. MissPortugal (Laura Gonçalves) 15. Miss Philippines (Shamcey Supsup) 16. Miss Venezuela (Vanessa Gonçalves)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ကာတင် ၁၆ဦးဟာ ရေကူးဝတ်စုံများနဲ့ ထပ်မံပြိုင်ပွဲဝင်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ ဆန်ကာတင် နောက်ထပ် ၁၀ဦး ကို ထပ်မံ ရွေးချယ်ပြန်ပါတယ်။
ဆန်ကာတင် ၁၀ဦးတို့ရဲ့ အလှ
ဆန်ကာတင် ၁၀ဦးတို့ဟာ ညနေခင်းဝတ်စုံများနဲ့ ဆက်လက် ယှဉ်ပြီးနောက်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှား ကျော့ရှင်းပြေပြစ်တင့်တယ်တဲ့ မိန်းမပျို ၅ဦးဟာ နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် စာရင်းထဲ ဆက်လက်ပါဝင်လာသူများကတော့
*Miss Angola* – Leila Lopes , *Miss Ukraine* – Olesya Stefanko , *Miss Brazil* – Priscila Machado , *Miss Philippines* – Shamcey Supsup , *Miss China* – Luo Zilin တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မယ်ငါးဦးရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံတစ်ချို့ကို ဖော်ပြရရင်
အညိုရောင်မယ်ရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ဟန် (ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ ရမှတ်အလွန်နည်းခဲ့ပါတယ်။ အသားမဲလို့များလားး)
လွတ်လပ် ပွင့်လင်းတဲ့ ညနေခင်း ဝတ်စုံဖြင့် မခို့တရို့ သူမ...
Miss Angola (Leila Lopes) ဟာ ညနေခင်းဝတ်စုံနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာတော့ ရမှတ်များခဲ့ပါတယ်။
Miss Ukraine ရဲ့ ကြော့ကြော့မော့မော့ ညနေခင်းဝတ်စုံ
Miss Brazil ရဲ့ အားမာန်ပါတဲ့ အဝါရောင် ညနေခင်းဝတ်စုံ
့နွဲ့နှောင်းနှောင်း လမ်းလျှောက်ကိုယ်ဟန်ပြတဲ့ Miss Philippine ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံ
Miss Philippine ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံက သိပ်လှတယ်လို့ ပြောကြသလို အာရှသူ ဖိလိပိုင်မယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွမ်းကျင်ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများက Miss Universe ဘွဲ့ကို သူမသာ ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံရဆုံးဖြစ်ပြီး ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ရာမှာရော၊ ညနေခင်းဝတ်စုံနဲ့ပါ အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင် အလွန်ကြိုက်သော တရုတ်ပြည်မှ Miss China ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံ
ဆန်ကာတင်ငါးဦးထဲမှာ အာရှက နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Miss China နဲ့ Miss Philippine နှစ်ဦး ပါဝင်နေပါတယ်။ ငါးဦးထဲမှာ Miss China ဟာ အရပ်အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၅ပေ နဲ့ ၁၁လက်မခွဲ ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ကာတင်ငါးဦးတို့ဟာ မိမိကို မေးခွန်းမေးမည့် ဒိုင်ကိုမဲနှိုက်ပြီး ရွေးချယ်ရပါတယ်။ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရာမှာ မယ်ငါးဦးစလုံး ကောင်းမွန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ကြပေမဲ့ အင်္ဂလန်မှာ နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အင်ဂိုလာမယ်က စကားပြန်နဲ့ ဖြေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသွားပါတယ်။ Miss Philippine ဟာ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုရာမှာ စကားပြန်မလိုဘဲ သူမရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော အရည်အချင်းကို ပြသနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများက Miss Philippine လေးကို ပထမဆုရမယ်လို့ မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်။ အင်ဂိုလာမယ်ကလည်း မေးခွန်းများကို စကားပြန်နဲ့ ဖြေဆိုပေမဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပြီး မေးခွန်းကိုဖြေရင်း ပြုံးလိုက်တဲ့ အပြုံးလေးဟာ ချိုမြလွန်းလို့ ဒိုင်တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။ မေးခွန်းများ ဖြေပြီးနောက်မှာတော့ Miss Universe အတွက် ဆန်ကာတင်ငါးဦးထဲမှာ အာရှမယ်နှစ်ဦးဟာ Fourth Runner Up နဲ့ Third Runner Up နဲ့သာ ကျေနပ်လိုက်ရပြီး Miss Angola – Leila Lopes , Miss Ukraine – Olesya Stefanko , Miss Brazil – Priscila Machado တို့ သုံးဦး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ Miss Brazil ဟာ တတိယ ( Second Runner Up) ရကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပြီးတော့
Miss Ukraine နဲ့ Miss Angola တို့ နှစ်ဦးသာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ ရဲ့ Miss Universe ဟာ သူမ ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာတဲ့နာမည်လဲကြားရော အင်မတန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အညိုရောင်မလေး Miss Angola ဟာ Miss Universe 2011 ဘွဲ့ကို ပိုင်ဆိုင်သွားခဲပါတယ်။
Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ အထူးဆုများဖြစ်တဲ့ Miss Congeniality ကို *Miss Montenegro* ( Nikolina Loncar) Miss Photogenic *ဆုကို Miss Sweden* ( Ronnia Fornstedt) နဲ့ Best National Costume ဆုကို *Miss Panama* –(Sheldry Saez ) တို့က ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၆ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆မှာ မွေးတာကြောင့် အသက် ၂၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Miss Angola ဟာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ Benguela မှာမွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်။ နာမည် အပြည့်အစုံမှာ Leila Luliana da Costa Vieira Lopes ဖြစ်ပြီး Miss Universe ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ၂၀၁၀ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အင်ဂိုလာနိုင်ငံရဲ့ Miss Angola ရွေးချယ်ပွဲမှာ ပထမဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ Miss Photogenic ဆုကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရမယ်ဆိုရင်လဲ ရချင်စရာပါ။ အသားညိုပေမဲ့ မျက်နှာ အနေအထား ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အလွန်လှပတာကို သူမဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင် တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
အရပ် ၅ပေ ၁၀လက်မခွဲရှိတဲ့ Miss Angola ဟာ ၂၂ရာစုသစ်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး လူမည်း အာဖရိကန် အမျိုးသမီးအဖြစ် Miss Universe သရဖူကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အင်ဂိုလာမယ်ဟာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးလို့ သရဖူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် Miss Angola ရဲ့ ကောလဟာလများ၊ သတင်းများ ထွက်လာပါတော့တယ်။ သူမဟာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ Angola များကျင်းပတဲ့ Miss Angola ရွေးချယ်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် အင်္ဂလန်မှာနေထိုင်ကာ Business Management ကိုသင်ယူဖို့ ကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို အတုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းစာမျက်နှာတွေထက်မှာ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းမှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ Miss Universe အသစ်စက်စက် အင်ဂိုလာမယ် Leila Lopes ဟာ သရဖူကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ရဖွယ် ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ သတင်းစာများကတော့ အင်ဂိုလာမယ်ဟာ အင်္ဂလန်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ နေထိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း အတိအကျ ရေးကြပါတယ်။
အသားဆိုရင် ဖြူမှ လှတယ်လို့ ထင်ကြသူများကို အညိုရောင်ဟာလည်း လှပါတယ်လို့ သက်သေပြပြီး နိုင်ငံအသီးသီးက အဖြူရောင်မမတွေကို အပြတ်အသတ်ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့ အညိုရောင်မယ်လေး အင်ဂိုလာမယ် တစ်ဖြစ်လဲ Miss Universe ဟာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေ တော်တော်များများ လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ Miss Universe တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို ယခင်ထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ စိတ်ကူးရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြုံးအလှပိုင်ရှင် ညိုချောလေး Miss Universe Lopes တစ်ယောက် သရဖူကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကျေးဇူးစကား။ ။ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်အောင်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းအားပေးကာ အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ ကူညီရှာဖွေပေးကာ ၊အချိန်မီရေးနိုင်ဖို့ အားတက်သရော ကူညီပေးတဲ့ ကိုမော်ကြီးနဲ့ ချစ်စွာသော အစ်မ မမြသွေးနီတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။
29 Responses to “အညိုရောင် မယ်စကြာဝဠာ”
အမျိုးသား ဝတ်စုံနဲ့ ပုံတွေက တစ်ယောက်တမျိုး မရိုးအောင် လှတယ်၊ Miss Japan ကို မြင်တော့ လက်ထဲက ကင်ဒိုဓားကို တွေ့ပြီး ပြုံးရသေးတယ်၊ ဒိုင်တွေတော့ နည်းနည်း ကျောချမ်းမယ်နော်၊း) အင်ဂိုလာမယ်က ညိုညက်တဲ့ အသား၊ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့မို့ ထိုက်တန်ပါတယ်..၊ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ မချောရေ...။
အခုကတည်းက လေ့ကျင့်ထားမှရတော့မယ်အစ်မရေးP
မယ်စကြာဝဠာလည်းလှတယ်။ အားလုံးလည်းလှတယ် ချောရေ။ ထူးထူးဆန်းဆန်းဝတ်စုံလေးတွေကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။
အားလုံးလှတယ်.. ဒါပေမဲ့ တွေးမိတယ် တို့မြန်မာနိုင်ငံကကော ဘာလို့များ ၀င်မပြိုင်တာလဲလို့ပေါ့ ..... ခုလိုတကူးတက သိချင်နေတာကို ရှာဖွေဘာသာပြန်ပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူး... :-D
ကောလဟာလဆိုတာ အောင်မြင်တဲ့နောက် ကပ်ပါစမြဲပါ.. ဘောလုံးအမဲလေးလဲ တခြားရောင်စုံဘောလုံးလေးလို အမြင့်ကို ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်... သူ့ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်..း)
တစ်ဝကြီး ငေးမောသွားပါတယ်။ လောလောဆယ် အိန္ဒိယမှာနေနေလို့လား မသိဘူး ချောရေ။ သီရိလင်္ကာမယ်လေးရဲ့ ၀တ်စုံက အလှဆုံးပဲ။ ဟိ ဟိ။ Miss Angola က တကယ် ပထမဆုနဲ့ ထိုက်တန်ပါပေတယ်။ ချောပါတယ်။ မည်းတာကလွဲလို့ပေါ့။ အကုန်လုံး မမည်းပါဘူး။ သွားလေးက ဖြူစွပ်နေတာပဲ။ ရုပ်က အဆိုတော် ဂျနဖားလောပတ်စ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်နော်။
ထိုင်းကရိုးရာဝတ်စုံလေး လှတယ် မြန်မာဆိုရင်ထိုင်မသိမ်းလေးနဲ့လှလှလေးပြိုင်လို့ရတာပေါ့.မြန်မာမလေးတွေပြိုင်ပွဲဝင်ကြရင်သိပ်ကောင်းမယ်..ဖိလိစ်ပိုင်မယ်..သြစတေးလျမယ်နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား မယ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ..
ဖြေသွားတာတွေအထဲမှာ Miss Ukraine ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ... ဖိလစ်ပိုင်မယ်ကျတော့ မေးတဲ့သူက နင်ချစ်တဲ့သူကိုလက်ထပ်ဖို့ နင့်ဘာသာရေးကိုလက်လွတ်ခံမလားလို့ မေးတာကို သူက သူက ဘုရားကိုသူချစ်တဲ့သူထက်ပိုချစ်လို့ သူ့ ချစ်သူကလဲ သူ့ ဘုရားကိုပါလိုက်ချစ်သင့်တယ် လို့ ဖြေတယ်လေ ဒါသံတမန်နည်းမဆန်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ (အန်ဂိုလာထက် ယူကရိန်းကိုရစေချင်တယ် :P)
အင်း.. မဲရင်လဲ အဲဒီလို အစွမ်းကုန် မဲမှ။
..အသားတော် အရောင်ထွက်၊ မှောင်နက်လို့ မဲညို... ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ ထင်တယ်။
မဲမဲ ဖြူဖြူ လူဆိုတော့ ချစ်အောင် နေတတ်ရင် ချစ်စရာကောင်းတာပါဘဲ။
အင်ဂိုလာမယ်လေးက သွားလေးတွေရယ်၊ နှုတ်ခမ်းရယ် မျက်လုံးလေးကလည်း ရီနေတာပဲ လှတယ်။
အကုန်လုံးလှတယ်။ ၀တ်စုံတွေကလည်း လှလိုက်တာ။ ဘာလို့များ အဲဒီလောက်လှနေကြပါလိမ့်။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဒီပိုစ့်လေး ရေးလို့ ကျေးဇူး။ မကြည့်လိုက်ရလို့။
ဒါမှ ဦးဟန်ကြည်တို့ အမျိုးအစစ်...ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းတုန်းက ကြွေးကြော်သလို မဆီမဆိုင် ထကြွေးကြော်လိုက်ဦးမှ “ ဗျုိုင်းတွေ ပြန်သွား...ကျီးကန်းခေတ်ရောက်ပြီ “
တန်ဇန်းနီးယားမယ်ကတော့ သူအနားမကပ်ရဲအောင်ထင်ပါ့ တစ်ခါတည်း အချွန်တွေ အတက်တွေ တပ်ထားလိုက်တာ...ရိုးရာဝတ်စုံထဲမှာဖြင့် ဘိုလီးဗီးယားမယ်ရဲ့ ၀တ်စုံကြိုက်ပါ့...အိမ်ပေါ်မှာ တစ်ပတ်လောက်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခိုင်းရရင်ဖြင့် တံမြက်စည်းလှည်းရ အတော်သက်သာမယ့်ဖြစ်ခြင်း...
ဖိလိပင်းမယ်က အင်္ဂလိပ်လို တတ်ပေမပေါ့ဒေါ်ချောရယ်...သူရို့တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ဘိုလိုကောင်းကောင်းကျွမ်းသကိုး...တစ်ခါတစ်ခါ သူရို့နဲ့စကားပြောဖြစ်ရင် ကိုယ့်ခမျာမှာ အသံထွက်ရမှာတောင်ရှက်လို့ လိုသလောက်ပဲ ချွေပြောယူရတဲ့ အထိ...
အားလုံးလှတယ်မချောရေ။ အရပ်တွေကလည်း ရှည်ပါ့။ အရပ်ရှည်ပေမယ့် အချိုးအဆက် အရမ်းလှကြတယ်။ မြန်မာ မပါသေးတာကတော့ နာသကွာ..း)။ ညိုချောလေးက ရယ်လိုက် ပြုံးလိုက်ရင် တကယ်လှတယ်။ မျက်နှာကို ကြည်နေတာပဲ။
Miss Peru ရဲ့ ၀တ်စုံလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ ဆုရသွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ အပြုံးကတော့ အစ်မပြောသလိုပဲ တော်တော်လှတယ် နောက်တစ်ယောက် အရှေ့တောင်အာရှကပေမယ့် ဒီိလိုပြိုင်ပွဲကြီးအထိ ၀င်တိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Miss Philippine လေးကို ကြိုက်တယ်ဗျ.
ဒီတစ်ခေါက် Miss Universe မှာ အာရှသူတွေ ဇကာတင် ၅ယောက်အထိ ပါဝင်လာတာ အားရမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ အမြဲပါနေကျ India မယ်တစ်ယောက် ၁၀ယောက်ဇကာတင်ထဲတောင် ပါမလာခဲ့ဘူးနော်။ အရပ်ရှည်ပြီး Cute ဖြစ်တဲ့ Miss China ကို သဘောကျတယ်။ Miss Philippineကတော့ သူလမ်းလျှောက်ပုံကို ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီဘူးလို့ ထင်တယ်။ အရမ်းကို စွဲဆောင်မှုရှိပြီး အရမ်းSmart ဖြစ်တယ်။ Miss Universe ရသွားတဲ့ Angola မယ်က နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတယ်၊ သူ့ရဲ့ အသက်ဝင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ ချိုမြတဲ့ သူ့အပြုံးက ပရိသတ်အားလုံးကို သိမ်းကျုံးယူလိုက်တယ်။ ထူးခြားတာက သူ့ရဲ့အပြောင်သိမ်းထားပြီး ထုံးထားတဲ့ ဆံထုံးပဲ။ ဆံပင်ဖြန့်ထားတဲ့ မယ်တွေကြားထဲ သူ့ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံက သူ့အလှကို ပိုကျော့ရှင်းသွားသလိုပဲ။ အိမ်ရှင်Brazil မယ်ကို တတိယပေးမယ့်အစား Miss Philippineကို ပေးစေချင်တယ်။ Brazil မယ်က လှတယ်လို့ ခံစားလို့ မရဘူး ချောရေ။ ကွန်နက်ရှင်အခက်အခဲတွေကြားက အခုလို ပုံတွေ စုံလင်အောင် တင်ပေးတဲ့၊ ဖတ်ချင်တာလေးကို အခုလို အားရပါးရ ဖတ်ခွင့်ရလိုက်ရလို့ ချောကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချောရေ…။
ထိုက်တန်တဲ့ သူရသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်တယ်။
ဟီးဟိဟိး) လှသမျှအကုန်ကြိုက် ဒါပေမယ့် တူရို့ကိုမောင်ဘကြိုင်တီယောက်မှမကြိုက်ဘာရို့လည်းဆိုတော့ တူရို့မှမောင်ဘကြိုင်ကိုမကြိုက်ထှား)
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေပြူးထွက်နေအောင် ဓတ်ပုံတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်အထိ အာရုံကိုစူးစိုက်ပြီး ငမ်း အဲလေ ကြည့်သွားပါတယ်ဗျား)
အပေါ်က ကိုဘကြိုင်ကြီး ရဲ့ သားရည် တွေ ဟာ အောက် က အမ ရွှေစင်ရဲ့ ကောမန့် ထဲကိုတောင် တစက်စက် ကြနေလေရဲ့
ပုံတွေ တင်ရတာ မမတော်တော်ပင်ပန်းမှာပဲနော်။ တကယ်ပါ မမ ရေ ချီးကျူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကာတွန်းပုံလေး ၁၅ ပုံလောက် တင်ဖို့အရေး တကယ်စိတ်ညစ်မိပါတယ် :)
သူ့ အပြုံးလေးက ချစ်စရာလေး...
အကုန်လှတယ် ...း))
သူ့ အပြုံးက ကူးစက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်..ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားထဲက ခုလို စုံစုံလင်လင်လေး တင်ပေးတာ ကျေးဇူး မချော..
Usingatranslator is more often than notatrick to get more time to think forabetter answer :)
အမျိုးသားဝတ်စုံတွေ တီထွင်ချုပ်လုပ်ထားတာ တကယ်ကို ထူးခြားဆန်းပြားလှပလွန်းလှပါပေတယ်။ မယ်ကလေးက လှတာထက် မြင်ရတာ အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အသားမဲပေမယ့် ရုပ်ရည်လေးက ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်ရသွားတယ်ထင်တာပဲ။ ပုံတွေတင်ရတာ ချောတော့ အတော်ပင်ပန်းသွားမှာပဲနော်။ အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါချောရေ။